Birhaanuu Naggaa Reebamee? Abiy Mootummaa Ce’umsaa Maali Dhaabuuf? – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosBirhaanuu Naggaa Reebamee? Abiy Mootummaa Ce’umsaa Maali Dhaabuuf?
Kan Araara Jibbu Seexana
Biyya kana jiraachisuuf mareen Biyyaalessaa(National Dialogue) Murteessadha.
Nama keenyaaf Ammmayyuu Dubbiin hin Galle
Namni keenya muraasni Qoonqoo isheef jettee Aangoo fi taayitaa gurguddaa irraa teessee ilmaan iyyeessaa lolatti bobbaaftee of nagaan kaambii waraanaa keessa teessi .Utuun ani Kaabinee ta’ee Waajjira polisiitin dhaqee hidhama malee utuun shaakkala loltummaa hin qabaatin Ganda baadiyyaa hoji dirree deemee hin du’u.
Mee ilaala Koreen Qindeessituu Godinaa fi Aanaa ofi manaa gadi hin baatu garuu Namoota keenya hoggansa sadarkaa gadii irra jiran akka kubba waliif gadi hoofaa jirti.Warri deemani du’a saree du’aa jiru adaraa+99 Namni firri kee kaabinee ta’ee erga firri kee du’ee hin boo’in utuu inni fayyaa guutuu qabuu qabi manatti deeffadhu.
Namni hedduun se’achi du’uuf jira.Bu’aan mootummaan gadi taa’ee maree hunda hirmaachise haa godhu jedhamee gaafatamaa jiru ammayyuu miseensota PPf sadarkaa gadi irra jiraniif hin galin jira.WBO guyya guyyaan humni isaa dabalaa jiru,biyyi kun filannoon tasgabbaa’a jedhani yaaduun soba.
Mootummaan kun burjaaji amma keessa jiruun kanaan nama ajjeesaa,hidhaa fi Reebaa ittuma fufee humnaan bulchuuf hiree guddaa qaba yoo qaamni Nageenyaa kun ajeja mootummaa irraa fudhatee hojjechuu kan itti fufee nama miidhu ta’ee ammas PP itti fuftee nama hedduu fixxee ficcisiisuuf jirti.
Mootummaan kun holola media,baayyina humna waraanaa,hiriira deggersaa fi Qarshiin nama goyyomsee cimaa of fakkeesaa jira.Namni baayyeen kanuma ilaalee waan mootummaan kun cimaa itti fakkaatee burjaaje’aa jira.
Mootummaan kun ergi gaafa aangoo qabateeti Rakkoon nageenyaa,dimokiraasii fi misoomaa halkaniif guyyaa dabalaa jira garuu nama keenyaaf dubbiin hin gallee. Kottaa hundi keenya bakka jirru teenyee mariin biyyaaleesaa haa godhamu jennee gaafanna.Nama baayyetu quba isaa taa’ee nyaachuuf jira.
biyyaaf hin taatu quba qabadhu!!!